Iibso USB Charging Mashiinka Mashiinka Fure & Furaha Baaskiil - Rar Bilaash ah & Cashuur La'aan | WoopShop®
USB Faafin USB Keydka faraha Mootada & Baaskiil Lock
$ 51.99 qiimaha joogtada ah $ 86.99
USB Faafin USB Keydka faraha Mootada & Baaskiil Lock gadaal baa laga keenay oo markab sida ugu dhaqsaha badan ayuu u soo noqonayaa markuu kaydka ku soo noqdo
Nooca Qalabka: Daawaha Aluminium + Xarkaha birta ah ee birta ah
Nooca Shayga: Ilaalinta Xatooyada
Miisaanka Shayga: 0.33kg
Magaca Model: 318612
Qalabka sawirka faraha: 12mmx12mm
Furashada habka: faraha
Awoodda faraha: 20 gogo '(2 maamule + 18 isticmaale caadi ah)
Nooca baytariga: batari lithium 3.7V / 110mAh
Nolosha batteriga: kharashka buuxa wuxuu socon karaa hal sano
Heerkulka shaqada: -10 ℃ - + 45 ℃
Qiimeeyn la'aanta biyaha: IP65
Taabasho fudud xallin dhibaato kasta
Fartaadu waa furahaaga oo waxay qaadataa oo keliya 1 sekan inaad furto. Qufulka Keyless Smart Fingerprint wuxuu ku qalabaysan yahay teknoolojiyad farshaxan oo casri ah oo leh aqoonsi otomaatig ah, badbaado, iyo ku habboonaan.
Ballaca Cable: 0.4 ", Length: 39.4" (silsiladda dheer ee baaskiilka ee lagula taliyay mootada, laba giraangiraha ama qufulka baaskiillada badan).
Biyuhu (IP66), Nabadgelyo La'aan iyo ilaalin dheeraad ah ayaa iska leh dhammaan xaaladaha cimilada, meel kasta oo aad tagtid.
Hadiyadda ugu fiican ee loogu talagalay dadka jecel ciyaaraha dibadda
Ha ubaahan inaad ka walwasho illaawista ereyga sirta ah.
Ha u baahnayn furayaasha iyo taleefannada gacanta.
Ha u baahnayn talaabooyin badan si aad u furto qufulka.
Badeecadda waxay u baahan tahay in si buuxda looga qaado inta aan la isticmaalin markii ugu horreysay.
Fadlan si taxaddar leh u akhri buuga isticmaalaha kahor intaadan isticmaalin.
Kahor Sameynta, Faraha kasta ayaa furi kara furaha sirta ah.
Faraha ayaa la galay markii ugu horeysay mar labaadna waa faraha faraha maamulka. dhammaan faraha kale waxay u baahan yihiin inuu oggolaado maamulka.
Markaad furto, tilmaamaha casaanka iyo buluugga ah ayaa si isdabajoog ah u ifaya, oo tilmaamaya awood koronto yar. waxaad u baahan tahay inaad ku soo dallajiso faraha farahaaga ee waqtiga.
Fadlan ha ku shubin qufulka faraha faraha biyaha muddo dheer.
1 x Quful Baaskiil
IT waa fiicantahay, si sax ah ayey u shaqeysaa
U shaqeeyaa sidii la rabay